Mugshot - Sports Stars Mugshot Gallery
A Gallery of Mug Shots yeZviitiko Zenyika Dzakakurumbira
Uye zvavakaita kuti vatore mufananidzo wavo
Nyanzvi dzezvemitambo uye vanoita zvemitambo vari mukati uye vanobuda kunze kwemashoko kune zvakawanda kupfuura kungoita maitiro avo. Apo mumwe munhu akasungwa vanotarisana nekuwana mufananidzo wavo wakatorwa sevamwe vanhu. Asi kufarira kwevanhu mukuona vatambi vezvidzidzo vakakurumbira zvakanyanya kukunda kupfuura iwe wevoruzhinji Joe. Heino shanduro yemugshots pamwe chete netsanangudzo yematambudziko iyo mutambi wacho aona.
MunaNovember 2008, Cam Newton akanga achienda kuYunivhesiti yeFlorida uye achitamba muchechi yebhola raFloran Gator paakasungwa nekuba kombiyuta ye laptop kubva kune mumwe mudzidzi.
Apo mapurisa akaenda kundotarisana neNewton pamusoro pee laptop, akadzinga laptop yacho pahwindo rake. Pakupedzisira, akapiwa mhosva yekubavha kukuru, kuvhara, nekudzivirira kururamisira.
Newton yakamiswa kubva muchechi mushure mokunge laptop yacho yawanikwa mune zvake.
Zvose zvinopomerwa neNewton zvakaderedzwa mushure mokunge apedzisa chirongwa chekatongi chaakagadziriswa iye akaiswa mukati mushure mokubvuma kudare remhosva kuti akanga ave nekombiyuta yakabiwa.
Muna 2010, Newton akati izvi nezvekusungwa kwake muFlorida:
"Ndinotenda kuti munhu haafaniri kufunga somunhu akaipa nokuda kwekanganiso chisina maturo chavakaita," akadaro Newton. "Ndinofunga kuti munhu wose anofanira kuva nechiitiko chechipiri." Kana vakarova mukana wechipiri, saizvozvo ngavave ivo.
Wekare weNew York Giant Lawrence Taylor (Aka LT) akawana chikamu chechitatu mumutambo weNews Stars Mugshot Gallery.
Maererano nemapurisa eRolandland County, muna May 2010, Lawrence Taylor akasungwa uye akatongerwa mhosva yechitatu yekubatwa chibharo, kushungurudza hupfambi, kushungurudzwa kwepabonde nekuisa pangozi kufara kwe mwana.
Mapurisa akati Taylor, ane makore 51, akanga achigara pahotera yeNew York apo Rasheed Davis, anozivikanwa kuva pimp, akaunza mukomana wemakore gumi nematanhatu muimba yaTrans for sex. Apo musikana wacho akaramba, Davis akamuendesa kuna Taylor uye akamurova zvepabonde, akabva amubhadhara $ 300. Akaramba mhosva.
MunaJanuary 2011, Taylor akabvuma chikumbiro chemukati uyu uye akateterera mhosva yezvikanganiso zviviri zvekuita zvepabonde nekukumbira hufeve.
Taylor, uyo akabvuma kuti arara nemusikana, akati iye akamuudza kuti aiva nemakore makumi masere nemashanu. Akatongerwa makore matanhatu kuongororwa. Nokuda kwekuteterera mhosva, Taylor anofanira kubhadhara semunhu anoita zvepabonde.
MunaMuvhuro 2011, Taylor akapiwa nharaunda yekutanga yepabonde yepamusana 1 iyo inofungidzirwa sehutano husina ngozi uye zita rake haringaonekwi pamusana pekuregererwa kwepabonde kwepabonde.
Akasungwa nekuda kwekurova bhakadzi wake.
Manny Ramirez, 39, akasungwa muWeston, Florida munaSeptember 2011, nekuda kwekunge akarova mudzimai wake panguva yemakakatanwa emhuri.
Maererano nemitauriri, Ramirez akati akarova mudzimai wake, Juliana, izvo zvakamuita kuti arove musoro wake pamusoro. Mapurisa akashevedzwa uye akapiwa mhosva nebheteri. Akaramba zvipomerwa zvose.
Ramirez akasiya basa mugore ra2013 kubva kuMampa Bay Rays mushure mekunge, kwechitatu kwebasa rake, akaedza kuva nehutano hwekuita zvinodhaka-kushandiswa zvinodhaka muhutano hwake.
Musi waFebruary 16, 2011, Detroit Tigers baseball nyota Miguel Cabrera akasungwa pamusana pekutyaira kwekutyaira motokari mushure mekunge mapurisa anonzi ainwa doro kubva mubhodhoro rekutsvaga.
St. Lucie County Florida vatevedzeri veSheriff vakati Cabrera akanga achifamba-famba achisimudza maoko ake kumusoro mumhepo vasati vasungwa. Akati aiti kumapurisa, "Munoziva here ini ndiri ini? Hamuzivi chinhu pamusoro pematambudziko angu."
Apo Cabrera akaramba kupinda mumotokari yemotokari mapurisa akamurova kanomwe pamabvi ake.
Cabrera akatongerwa kutyaira pasi pesimba uye maitiro maviri ekudzivisa mukuru wehurumende pasina chisimba.
MunaNovember 2009, nhoroondo yaimbova yeNew York Giant, Lawrence Taylor akasungwa muFlorida nekubva panzvimbo yechirimo mushure mekunge akarova motokari. Maererano nefaira remapurisa, Taylor akafunga kuti akarova varindi paHialeah-nzvimbo yekutarisa.
Taylor akatemwa, akabva asunungurwa mushure mokutumira $ 500 mari.
Musi waDecember 29, 2006, mumiriri weavyightight Mike Mike waive akapomerwa mhosva yekutyaira pasi pesimba uye kuva necocaine mushure mekunge amiswa nemapurisa muS Scottsdale, Arizona. Maererano nemapurisa, Tyson aive achibuda kunze kwepakisi yejasikibhu paainge ava pedyo nekurova motokari yemapurisa. Mapurisa akabva amuona achipukuta poda yakachena kubva padhibhodhi yemotokari yake.
Mushure mokundikana kushanda kwemaitiro ekudzivirira, mapurisa akasunga Tyson ndokubva aona kuti akafungidzirwa cocaine muhomwe yake kumashure uye mumotokari. Uyewo mumapurisa mushumo, Tyson anotsanangurwa achitaura kuti akanga ari muropa nechinetso.
Marv Albert, mutambi wemitambo yeNBC, akasungwa musi waMay 27, 1997, pamusana pekunge akarova musikana wake, uyo ane makore 42 anonzi Vanessa Perhach, kanoverengeka pamusana wake ndokumumanikidza kuti aite zvepabonde pamuromo, shure nharo muimba yake yehotera paPentagon City Hotel.
Mushure mokunge DNA yakabatana naAlbert kunyohwa kuwanikwa kuPerhach, Albert akasungwa uye akakumbira mhosva yekurova uye kutengesa mabheji. Mhosva yekunyadzisira yakadonhedzwa.
Mutongo waMigiramu wemwedzi gumi nemaviri wakamiswa uye gore rakatevera zvikwereti zvose zvakadonhedzwa.
Somugumisiro wekurova mhosva NBC yakaderedza makore makumi maviri nemakore asi yakadzorerazve shure kwemwedzi 18. Akashandira NBC kusvikira muna 2009 uye akabhadharwa neCSS muna 2011 semushambadzi wekutamba mitambo yemitambo yemitambo yeNFL paBBC.
Andre the Giant (aka Andre Roussimoff) yaiva chiratidzo munyika yekutwisana mukati me1970 uye kutanga kwema80s. Pamakirogiramu anopfuura mazana mashanu, zvakanzi akangwarira kuti arege kukuvadza shamwari dzake dzepamberi paaiva muchende, achimuwana zita rokuti Gentle Giant. Uyu mugomba wakaputirwa muna 1989 muIowa, mushure mekunge akasungwa nekuda kwekudaidzwa uye kusagadziriswa kwevanhu vasingazivikanwi nekamera.
Mutambi wechikwata wema basketball Gilbert Arenas (Aka Agent Zero) akasungwa munaMay 2006 munaMiami mushure mekunge apomerwa kutyora mutemo wemapurisa. Chiitiko chacho chakaitika apo Arenas akabuda mumotokari yake kuzobatsira shamwarimate Awvee Storey, uyo akanga ari kusungwa nekuda kwekuvhara motokari. Mumwe mupurisa akaudza Arenas kuti adzokere kumotokari yake, iyo inonzi Arenas haana kufarira, zvichiita kuti asungwe. Mhosva yacho yakazobviswa gare gare.
New York Giants receiver Plaxico Burress akatongerwa makore maviri ari mujeri uye makore maviri kuongororwa kuNew York mushure mokunge chiitiko chaNovember 2008 apo Burress akazviwisira pangozi pahudyu paManhattan nightclub. Akapomerwa mhosva mbiri dzechiremera chechibharo chechimbo muchikoro chechipiri.
Munguva yekupomerwa mhosva kwake muna Aug. 2009, Burress akabvuma kubvunzurudza uye akateterera mhosva yekutya zvombo zvishoma.
11 ve 74
NBA nyota Darrell Armstrong akasungwa muOrlando munaJuly 2003 mushure mokunge avhiringidza chitima mushure mekunge akundikana kuwana taxi. Maererano neshumo racho, Armstrong akabva arwisana nemapurisa akazoita kuti asungwe. Akapomerwa nebheteri pamutemo wekudzivirira mitemo nekuramba kusungwa pasina chisimba.
Sacramento Madzimambo mberi Ron Artest akasungwa munaMarch 2007 mushure mekunge mapurisa akabvuma kudanwa 911 kubva kumusha wake weSacramento kumba zvichibva kuna mudzimai waArtest, Kimsha Artest. Nyeredzi yeNBA yakapomerwa mhosva yechisimba mumhuri uye kushandiswa kwemauto kuchengetedza munhu anenge apomerwa kupomerwa mhosva uye akazobudiswa pamabhiridha $ 50 000 kubva mujeri rePlace County.
Kana mhosva yacho inonamatira, iyi ichava yechipiri mhirizhonga yekurwisana neArtest. Muna 2004, Artest akapedzwa nekutsamwa nekutsamwa mushure mekusungwa kwake nekukakavara naamai vevana vake.
Anozivikanwa se "Dombo Cold Steve Austin" pakati pevrestling fans, Austin (waka Steve Steve Williams) akasungwa munaJune 2002 pamusoro pemhosva yekushungurudzwa kwekurohwa, shure kwekurova mudzimai wake. Akazobvunzurudza musakwikwi uye akatongerwa maawa makumi matatu emasangano evanhu.
Retired baseball player Wally Backman akashanda musi waNovember 1, 2004, semutungamiriri weArizona Diamondbacks, asi musi waNovember 5, akadzingwa mushure mekunge ane ruzivo pamusoro pematambudziko ake epamutemo uye emari akawira. Matambudziko acho aisanganisira chengetedzo yeCREI ya2001, kushungurudzwa mumisha, kushungurudzwa, uye kubhadhara mari.
15 ve 74
Booker Robert Tio Huffman, anonyatsozivikanwa naWWE wrestler persona Booker T, akasungwa muna 1987 pamusoro pemhosva dzezvokupamba muHouston. Akatongerwa makore mashanu ejeri mushure mekunge akakumbira mhosva asi akabudiswa mushure memwedzi 19. Mushure mokunge asunungurwa, akaenderera mberi nekubudirira basa rokutarisana kusanganisira kuwana mamiriyoni mashanu eWCW World Heavyweight Champion uye nhanhatu yenyika yose Champion.
16 ve 74
Marcus Bagwell, anonyatsozivikanwa nezita rake remhete, Buff Bagwell, muAmerican wrestler, uyo akapedza makore mapfumbamwe neWorld Championship Wrestling kubva muna 1992 kusvika muna 2001. Muna 2004, Bagwell akapedza mazuva gumi mujeri kuCobb County, Georgia pashure pokunge abatwa kutyaira pairi pasi pesimba remishonga (Lortabs neSomas). Paakasunungurwa, akapinda kliniki yekudzorera.
MunaDecember 2005, Lex Luger, Bagwell, naScott Steiner vakaperekedzwa kubva kune imwe ndege muMinneapolis mushure mekushungurudzika. Varume vatatu vakabatwa kwemaawa akawanda Bagwell naSteiner vasunungurwa uye vakatumwa pavakanga vatiza, nepo Luger yakaitwa pasina bhaari.
Musi waMarch 28, 2006, Bagwell akatongerwa mazuva mana ari mujeri nekuda kwemhosva yeDI muKennesaw, Georgia.
Mutambi weBc Basketball Charles Barkley akasungwa, asi akazoregererwa, nokuda kwekuita zvisina kunaka muna December 1997, mushure mekunge aputsa mhino dzaJoseph McCarthy mumusasa weMilwaukee. Iyi yakanga isiri nguva yokutanga iyo yakasungwa pakurwiswa mhosva. Muna July 1996, akasungwa mushure mokunge apinda muchinetso chekutamba muCleveland. Muna Gumiguru 1997, akapiwa mhosva yebheteri yakaipisisa uye akaramba kusungwa mushure mekukanda murume kuburikidza newindo regirazi pachitambo chekudhanha muOrlando.
Baseball star Ken Caminiti aine dambudziko newaini, steroid uye kushandisa zvinodhaka munguva dzakawanda dzebasa rake. Mushure mokunge apedza basa, akazogamuchirwa pachena steroid yake kushandisa, ndiyo yaiva yekutanga kugamuchirwa kubva kune chero mutambi wenhabvu. Zviito zvake zvakaguma neCongressal mibvunzo mune steroid kushandiswa pakati pevatambi.
Muna March 2001, Caminiti yakasungwa kuti ive yavo uye yakatongerwa kuongororwa.
Musi waOctober 1, 2004, mushure mokunge vaongororwa kuti vawane cocaine mwedzi isati yapfuura, Caminiti akabvuma kuputsa rusununguko rwake uye akatongerwa mazuva 180, asi akapiwa chikwereti kwenguva uye akasunungurwa. Musi waOctober 10, 2004, Caminiti yakanga yafa. Dhipatimendi reNew York City Medical Examiners Office rinoreva kuti rufu rwake "rwekudhakwa kwakanyanya nekuda kwekubatana kwekodhaine neopiate," asi chirwere chetachiona uye mwoyo wakawedzerwa zvaivewo zvikonzero.
MunaMay 2004, tennis nyanzvi Jennifer Capriati akatongerwa kubata mbanje mushure meKoral Gables, mapurisa eFlorida akaenda kuImbaire yekamuri yehotera vachitsvaka musikana watiza. Akagamuchira zvisiri izvo mukutsinhana nekuda kwekupa mazano ekurapa zvinodhaka.
MunaJuly 2002, aimbova NBA basketball player Derrick Coleman akasungwa mudhorobha rake reDetroit, Michigan uye akaraira nekutyaira pasi pesimba mushure mekunge mapurisa akamumisa kuti atyaira 100 mph. Iyi yakanga isiri yekutanga kana yekupedzisira kusungwa.
2001 - Coleman akabvumirana nekambani yake nokuti akaramba kutora mushure mekukanganisa muna Gumiguru 2001. Akazopedzisira asunungurwa kubva kudhakwa kwekutyaira kwekodzero nekuda kwemhirizhonga.
1999 - Coleman aipomerwa nekudhonza pamberi pevashandi paIndezzo Italian Ristorante uye akatongerwa nekuita zvisina kunaka. Haana kuteterera kukwikwidza kune kusavhiringidza kwekuita mitero inobva pachiitiko ichocho.
1997 - Coleman, pamwe nevamwe, vakasungwa uye vakapomerwa mhosva yekupindira kwebasa remapurisa muDetroit. Akasunungurwa pamusangano we $ 100 pamusana pemhosva yekutadza.
1988 - Coleman akatongerwa mhosva yezvakaipa mumutambo wechina uye kushungurudzwa Akazopa mhosva mhosva yekushungurudzwa uye kusazvibata, zvose zvisiri izvo.
1995 - Coleman akasungwa muDetroit ndokupomerwa mhosva yekuramba kutakura motokari yake nekupika kumapurisa. Nyaya yacho yakaguma mumagirrial.
Mike Danton, (akaberekwa naMichael Jefferson), akaenderera mberi kune veSt. Louis Blues hockey team, akakumbira mhosva paJuly 16, 2004, kurangana kuuraya mugovere wake, David Frost.
Mumhosva inoshamisa inosanganisira kushandiswa kwepabonde, kutonga pfungwa, uye kuuraya, Danton akatongerwa kwemakore manomwe nehafu pasina kukwanisa kusununguka. David Frost aigara aramba kuti akanga ari chinangwa chaDanton.
Pane rumwe rutivi, muna 2006, David Frost akapomerwa mhosva 12 dzekuita zvepabonde kune mhosva dzinonzi dzakamboitika nevanhurume vatatu nevanhurume vana pakati pemakore 14 ne16. Zviitiko zvakanzi zvikaitika paaiva Danton's young hockey coach.
Mudzidzisi weHockey player Sergei Fedorov akasungwa muMichigan munaSeptember 2001 nokuda kwekufambisa asi asingakwanisi. Fedorov akakumbira mhosva uye akatongerwa kuongororwa kwegore, maawa zana emusangano wevanhu, uye akarayirwa kubhadhara mari uye madare edzimhosva.
Muna December 2005, nyanzvi wrestler Ric Flair (aka The Nature Boy) akapiwa mhosva nekukuvadza kune pfuma yake uye kurwisa nyore uye bheteri mushure mekugumburwa kwemugwagwa muCharlotte, North Carolina. Zvakanakira Flair zvakabata mubatsiri pamutsipa ndokukanya musuo wemotokari yemotokari yemotokari yemotokari. Mhosva dzacho dzakadonhwa mushure mekupupurirwa kwemashoko kuti varatidze kuratidzika kwechirongwa.
Franklin Francisco. A
Major League Baseball pitcher Franklin Francisco akasungwa musi waJune 30, 2005, uye akatongerwa nebheteri yakaipa mushure mokukanda chigaro muboka revaMalland muSvondo 2004.
Chigaro chakatora mukadzi, zvichiita kuti akadzike zvakadzika pameso ake, izvo zvaida zvidimbu.
Francisco haana kukumbira mupikisano uye akatongerwa purogiramu yebasa uye mvumo yekutsamwa kwehasha. Akasimirirwawo kubva muboka kwezvakasara muna 2004.
25 ve 74
Joe Frazier. A
Kare mutsigiri wenyika yeightweight Joe Frazier akasungwa munaFebruary 2004 mushure mekunge mapurisa akabvuma 911 chisimba chisimba kubva kumba kwake North Philadelphia. Apo mapurisa akasvika mukadzi, amai vemwanakomana waFrazier, vakapindura musuo. Akaudza mapurisa kuti Frazier akanga amurova uye ikoko kwakakuvara kumeso ake kuti adzorere chirevo chacho. Mhosva idzi dzakazobviswa mushure mokunge mukadzi wacho akaramba kuratidza kupikisana naFrazier.
Oronde Gadsen. A
Aive akawana nzvimbo yakawanda neMiami Dolphins, Oronde Gadsen, akasungwa munaEpril 2004, nekuda kwekutyaira pasi pesimba muPembroke Pines Florida.
MunaFebruary 2002, uyo aimbova mukuru webhokisi baseball pitcher Dwight Gooden, anonziwo Doc Gooden kana Dr. K, akasungwa uye akapomerwa nekutyaira panguva yaidhakwa, ane chivhururu chakazaruka chewaini mumotokari yake, uye achityaira nechisimiriro chemvumo. Akatongerwa kutongwa pashure pokunge akakumbira mhosva ane mhosva shoma yekutyaira kusina maturo.
28 ve 74
Musi waMarch 12, 2005, uyo aimbova mudzidzi webhokisi rehondo, Dwight Gooden akasungwa uye akapomerwa mhosva yepamusoro yebhateri remuTampa, Florida. Nyaya yemapurisa yakati yakarova musikana wake mushure mokukandira foni pamusoro wake. Akasunungurwa mazuva maviri gare gare.
Musi waAugust 23, 2005, nhoroondo yekare yebhomba Dwight Gooden yakamiswa muTampa nokuda kwekufambisa motokari asi yakabva yatiza. Mapurisa akarondedzera kuti kutaura kwaGooden kwakanyangarika uye vakanzwa kunwa doro paari. Mushure memazuva matatu akazvishandura kuva mapurisa uye akagamuchira zvisiri izvo DUI nekuramba kusungwa kwemusungwa.
Muna March 2006, Gooden akasungwa nekuputsa kuongororwa kwake nemhaka yekushandiswa kwecocaine. Sechirango chake, aive nesarudzo yekuongororwa kwenguva refu kana jeri. Akasarudza jeri uye akapedza kubva munaEpril 2006 kusvikira asunungurwa munaNovember 2006.
MunaMarch 2003, Nzvimbo yepamberi yeDallas Cowboys, Dwayne Goodrich akatongerwa mhosva mbiri dzekuuraya vanhu uye zvitatu zvekukundikana kumira uye kupa rubatsiro pamwe nekurwadza kwakanyanya. Imhosva yacho yakakonzerwa nechiitiko munaJanuary 2003, apo Goodrich, achifambisa 110 mph, akapinda mumwengo unopisa moto, achirova varume vatatu, achiuraya vaviri, ndokubva atiza.
Varume vaviri avo vakauraya vakanga vari kubatsira mubatsiri wemotokari kuti apukunyuke motokari yake inopisa apo Goodrich akavakunda.
Musi waSeptember 8, 2003, Goodrich akatongerwa mhosva mbiri dzekushaya mhosva nekuregerera uye akatongerwa makore manomwe nehafu mujeri uye akabhadhara madhora makumi maviri nemakumi maviri ematambudziko.
MunaNovember 2003, Asia Grey, muteveri weNFL Cleveland Brown achidzoka shure kwaWilliam Green, akakumbira mhosva yekutambudzwa kwechisimba uye zvechisimba mumhuri. Maererano nemishumo, Green yakadonha pamatanho uye akawira pane chimwe chezvinhu zvaakanga akatakura-aine masendimita matanhatu. Akaenda kuchipatara uye akagamuchira zvidimbu zvitatu. Paakaongororwa, mapurisa akafunga kuti Grey yakarova Green mumashure nevhavha munguva yepikisano yepamba uye yakazoisa Grey musungwa.
Tanya Harding akakumbira mhaka muna 1998 kuti aratidze kurangana nekupomera mhosva mushure mekunge aramba kuti ane ruzivo rwepakutanga rwemurume wake wekare, iyo inosanganisira kuhaya murume akarova kuti arwisane nomukwikwidzi wake wekambiso, Nancy Kerrigan.
Muzvakazozivikanwa se "Whack Heard" Pasi Pose "Kerrigan akarwiswa ndokurohwa pamakumbo nebheton yesimbi panguva yekutamba kweSouth Championships muna 1994. Kerrigan aifanira kubuda kunze kwekukwikwidza uye Harding akakunda asi munguva pfupi yapakati pekutsvakurudza kunosanganisira chigadziro chababa vake vekare Jeff Gillooly kuti vadzivirire Kerrigan kuitira kuti Harding ingapinda muChampionship.
Pakutanga, Harding akaramba chero ruzivo rwechirongwa chacho, asi muna 1998, akabvuma kuti aine ruzivo rwekuti akadzivisa kubva kuvatsvakurudzi. Nokudaro, akabhadharwa $ 160 000 uye aifanira kuita maawa 500 emusangano webasa uye akazobviswa muhondo yake yenyika muna 1994 uye akarambidzwa neUnited States Skating yeupenyu.
33 ve 74
Eduardo Gory Guerrero Llanes, anonyatsozivikanwa nezita rake remhete Eddie Guerrero uye "Latino Heat," akanga ari mutongi wechechi weMexico muAmerica uyo munaNovember 2001 akatongerwa kutyaira pasi pesimba paaiva muFlorida.
Zvinosuruvarisa, musi waNovember 13, 2005, pazera remakore makumi matatu nemana, Guerrero akawanikwa akafa muimba yake yehotera muMinneapolis, Minnesota. Autopsy mishumo yakaratidza kuti Guerrero akafa nekuda kwekushaya mwoyo kwakanyanya, kwakakonzerwa neusingazivikanwi arteriosclerotic cardiovascular disease uye kuwedzerwa kwemoyo semugumisiro wekutanga anabolic steroid kushandiswa.
Kunyange zvazvo Guerrero akanga asina kunwa doro kana zvinodhaka zvisina kukodzera kwemakore anenge mana, kuwedzera kwake kwakapfuura kwakaita kuti mwoyo wake usakundikana. Panguva yekufa kwake, akanga achangoshandisa narcotic painkillers.
Kare mutambo wenyika wrestler Norris Harrison, Jr. (Aka Hard Body) akatongerwa muna Gumiguru 2005 nekukamanikidza vakadzi kuita ufeve. Maererano ne11Alive.com, nyaya yezvinyorwa ichiti, "kana vatsigiri vakanyengera vakadzi mubasa ravo, vakashandisa zvechisimba, kushungurudzwa kwepabonde, kutyisidzira kwekumanikidzira, kurara uye kushaiwa kwezvokudya, kugara vachitarisa, uye chirongwa chakakosha chekuita kuti vakadzi vashande zvisina kufanira sehure. "
Harrison akasungwa musi waAugust 18, 2004, mushure mekunge mumwe mukadzi akaudza mapurisa kuti akanga achibatwa pamusoro pake.
Kare anonzi Dallas Cowboys mutambi wechikwata uye mushure mezvo, ESPN's NFL Countdown muparidzi, Michael Irvin akasungwa muPlano, Texas mushure mokunge mapurisa akamumisa kuti afambise. Apo mapurisa akatsvaka motokari yake vakawana zvigadzirwa zvezvinodhaka uye vakasunga Irvin kuti vashandise chikamu C.
Irvin akazoti zvinhu izvi zvaive zvaakanga atora kubva kune shamwari (akazobudiswa sehama yake) achiedza kumubatsira nezvinetso zvake zvezvinodhaka.
36 pane 74
Allen Iverson. A
MunaJuly 2002, NBA All-Star Allen Iverson akatongerwa nemhosva 14, mamwe ainzi felony, mushure mokunge asungwa panguva yechinetso kumusha wababamunini vake. Maererano nemitauri uye nhamba 911, Iverson akakanda mudzimai wake Tawanna kunze kwemusha wavo uye gare gare, nehasha, akaenda kundomutsvaga paimba yababamunini vake. Zvakashamisika, paainge achivhara pfuti inoputika, akatyisidzira kuuraya muzukuru wake uye muvakidzani wake.
Iverson haana kutongerwa mhosva dzose uye shure kwehuchapupu huchapupu hwakapesana mutongi wacho akasiya zvese mhosva.
Angela Keathley. A
Caroline Panther Cheerleader Angela Keathley akasungwa musi waNovember 7, 2005, mushure mekunge aita zvepabonde muimba yevashambirati muchiteshi chesiku usiku muTampa pamwe nemumwewo cheerleader Renee Thomas. Mumwe mukadzi akamirira kushandisa chikumbaridzo akachema uye Tomasi akamupa mhosva kumurova iye zvakaguma kuti vasungwa vaiswe. Keathley akapomerwa mhosva yekutadza uye akadzivisa kusungwa.
Jason Kidd. A
Muna Mbudzi 2001, mutambi wechikwata webasa basketball Jason Kidd akatongerwa pamhirizhonga yemhuri kushungurudzwa mhosva mushure mekunge akasungwa nekurova mudzimai wake munguva yepikisano yemhuri. Kidd aifanira kubhadhara $ 200 yakanaka uye kupinda kumhuri yekupa nhaurirano mumhuri kwemwedzi mitanhatu.
Don King. A
Bhokisi rinokurudzira Don King raive nemakumbo akawanda nemutemo asati agona kubudirira mubhokisi. Chivi chakakomba chakakonzera kuti aende kujeri kwemakore mana mushure mekunge apomerwa mhosva yekuuraya. Mutoro wepakutanga wekuponda wakadonha pawakatongwa sekuzvidzivirira.
40 ve 74
Musi waJuly 6, 2000, Diedra Lane akauraya ndokuuraya murume wake, NFL achidzokera shure Freddie Brown Lane, Jr., mune izvo vatsigiri vepakutanga vaiti ndezvekuedza kuunganidza mari kune $ 5 Mamiriyoni ehupenyu hwe inshuwarisi yehupenyu, iyo yakatorwa pamusoro mwedzi asati afa.
Maererano nemishumo, Fred naDeedra Lane vakanga vane matambudziko emhuri uye Fred akanga achangobva kudzokera kumba kubva kuNashville kuenda kuCharlotte, North Carolina kumba kwake apo Diedra akamupfura. Makiyi ake aiva mumusuo wepamberi uye mabhegi ake akawanikwa mune foyer, pamwe chete nemapuranga gumi nemaviri.
Charlotte, NC, mutsigiri wenharaunda yeGentry Caudill akati pfuti yekutanga "yakabudisa mwoyo waFred Lane," uye "Sezvo Fred Lane akange avete pasi akafa Deidra Lane akafamba neropa rake ndokuisa pfuti kumusoro wake ndokumurova gumbo rake."
Diedra akadzivisa kupomerwa kwepamusoro-gorosi pamhosva pamusana pemishumo pamusoro peFred Lane yaimbova kushungurudzwa. Vatongi, vane hanya kuti Diedra aisazopomerwa mhosva, akabvuma chibvumirano chekumbira. Diedra akateterera nemhosva yekuuraya uye akatongerwa makore masere mujeri, pamwe nekurumbidzwa kwemakore matatu emakore akashandiswa kubva kune rimwe rekare rekubiridzira kwebhangi rakagadziriswa.
Muna March 2007, maneja weSt. Louis Cardinals Tony LaRussa akatongerwa nekutyaira kwekutya muJupiter, Florida.
MunaJanuary 2001, World Wrestling Entertainment nyanzvi Brock Lesnar akasungwa nekugamuchira steroids. Gare gare zvakatemwa kuti mapiritsi akanga asiri steroid uye zvikwereti zvose zvakadonhedzwa.
43 pane 74
MunaJanuary 2000, Super Bowl MVP Ray Lewis weBaltimore Ravens, uye shamwari Reginald Oakley naJoseph Sweeting, vakapomerwa mhosva yekuuraya vanhu vaviri vanobva kuhondo kunze kweAtlanta nightclub.
Chikumbiro chakaitwa chikaitika uye Lewis akareurura ane mhosva yekutadza kukanganisa kukanganisa kwekururamisira uye akapupura pamusoro pe Oakley na Sweeting. Akatongerwa gore rekuongororwa uye chibvumirano chekuti zvinyorwa zvake zvaizodedzwa kana akazadzisa zvaanoda zvekuedzwa kwake.
Muna Meyi 1996, NFL Hall of Famer Lawrence Taylor yakasungwa muMyrtle Beach, kuSouth Carolina uye yakapomerwa kuedza kuchengetedza crack cocaine. Mune chirwere chisingabvunzi, Taylor akatenga zvinodhaka zvisina kukodzera kubva kune zviremera uye akatongerwa kushanda kwevanhu.
Basa raColbert semutambarakede weNFL's New York Giants yakashungurudzwa nehuwandu hwake hwekudhakwa nekushandisa zvinodhaka. Mukubvunzurudzwa naMike Wallace muna 2003, Taylor akabvuma kushandiswa kwezvinodhaka uye kuoma zvakaoma munguva yeNFL.
Kusina zvinodhaka kubva muna 1998, Taylor akavhota muNFL Hall of Fame uye kubva panguva yakaonekwa pazviratidzwa zvepa terevhizheni uye akaonekwa pachifukidzo cheMutambo Illustrated nyaya yakatsaurirwa kune vekare vatambi uye nhamba dzemitambo.
Wrestler Lex Luger (aka Lawrence Pfohl) ndiye aimbova mumiririri wemapurisa uye wrestler wrestler, uyo akasungwa pamatare 14 emhosva yemhosva muna May 2003. Kusungwa kwake kwakauya mushure mekutsvakurudza nezvekufa kwemusikana wake Elizabeth Hulette, uyo akafa mumba mavo muMarietta , Jojiya. Munguva yekutsvaga imba yemudzimai, mapurisa akawana zvinodhaka zvisina kukodzera, izvo zvaisanganisira vanabolic steroids, OxyContin, testosterone neAlprazolam nezvimwe zvinhu zvinodzorwa.
Yakazove yakagadzirisa kuti kufa kwaHulette kwaive kwakanyanya kuderedza zvinodhaka.
Luger akateterera mhosva dzose uye akagamuchira makore akanaka uye mashanu ekuongororwa.
April 2003, wrestler Lex Luger (aka Lawrence Pfohl) akasungwa pamusana pekutengesa mabheji mhosva nekuda kwekurova musikana Elizabeth Hulette panguva yekukakavadzana kwemhuri. Kwapera mwedzi gare Hulette akafira pamba yeguta iri nemudzimai kubva kunowanzoitika kudengenyeka kwezvinodhaka uye doro.
Muna 2003, NFL mutambi Steven McNair akapomerwa neDPI uye ane mvumo yepamutemo yehuni.
NFL mutambi Randy Moss akasungwa munaSeptember 2002 mushure mekunge avhara mutungamiriri wepamberi nemotokari yake. Chiitiko chacho chakaitika apo Ross akanga achiedza kuita mhirizhonga isiri pamutemo uye hofisi yakamira pamberi pemotokari yake kumumisa. Iyo "bump" yakaita kuti mupurisa awire pasi. Motokari yaMoss yakatsvaga uye shoma shomanana yakawanikwa mukati. Akapomerwa mhosva yekupomerwa kweAsault neHairly Weapon iyo inoparadza uye kusagadzikana. Akatongesa mhosva yekutadza kwepamutemo kwemigwagwa, uye akarayirwa kubhadhara mari ye $ 1,200 uye kuita maawa makumi mana emabasa emunharaunda.
MunaEpril 1999, NBA nyota Scottie Pippen akasungwa uye akatongerwa neDWI, asi mhosva dzacho dzakadonhedzwa nekuda kwehuwandu hweuchapupu.
Muna Svondo 2002, Baseball Hall of Famer Kirby Puckett akasungwa ndokupomerwa mhosva yekusungwa kwenhema uye yechishanu-degree kuita zvepabonde zvekuita zvepabonde, mushure mekunge ataura kuti akachera mukadzi muimba yekudzidzira muEdheni Prairie, Minnesota. Akaedzwa uye akasunungurwa.
Muna December 2003, mutambi wechikwata chechikwata Zach Randolph akamira naPortland, mapurisa eOregon ndokupomerwa mhosva yekutyaira motokari pasi pesimba remuchu.
Zvimwe zvinetso zvepamutemo muRandolph zvakapfuura zvinosanganisira chiitiko chaJune 2006 apo mapurisa ePortland akamira motokari mbiri dzekutamba mumhepo 20 mph inomhanya. Mapurisa akanzwa mbanje, akatsvaga motokari ndokuwana zvombo zviviri zvakatakura. Vose motokari dzakanyoreswa kuRandolph uye zvakatarwa kuti aiva nechibvumirano chezvipfuva zviviri.
Vaimbova Indianapolis Colts vanodzokera kumashure kuDominic Rhodes vakasungwa pamatare eDI paFebruary 20, 2007, neParamende State Police mushure mokunge musungwa akavhara iye achienda 82 mph munzvimbo 55-mph. Maererano nemapurisa emapurisa, Rhodes yakabvuma kuva nekumwa zviviri kana zvitatu uye ropa rake-doro rinotengesa pa00. Muganhu wepamutemo muIndia ndewe08.
Musi waMarch 21, 2007, Rhodes akazvipa mhosva nemhosva yekutyaira uye kusaremekedzwa kweDI kwakadonhedzwa. Akagamuchira chikamu chemazuva zana nemakumi mana uye akatengesa $ 1,000. Rhodes kubva kubva muhurumende kuti abatanidze ma Oakland Raiders.
Muna July 2000, nhengo yeNBA yekare yainzi Dennis Rodman inopomerwa mhosva muCalifornia kudhakwa nekutyaira uye kutyaira pasina chikwata chekufambisa. Akagamuchira makore matatu kuongororwa uye mukana wakanaka.
Mwedzi usati wasvika pakudhakwa kunodhakwa, paNovember 5, 1999, Rodman nemudzimai wake panguva iyo, Carmen Electra, vakapomerwa mhosva yevasina maturo mushure mekunge mapurisa achishevedzwa nekuda kwekurwa kwavo nekuchema. Mumwe nomumwe aifanira kuuya ne $ 2 500 mubhadha mari uye akaudzwa kuti agare anenge mamita 500 kubva kune mumwe. Vakanga vakaroorana munaNovember 1998 uye Electra yakatumirwa kurambana muna April 1999.
54 ve 74
Kare anonzi Texas Rangers pitcher Kenny Rogers akasungwa pamusana pezvakaitika pamusana pezvakaitika musi waJune 29, 2005, paakadhonza makamera maviri ndokukanda imwe yemakamera avo akanga awira pasi. Mumwe wevarume, Larry Rodriguez weDallas / Fort Worth Metroplex 'Fox Network yakabatana KDFW, akaendeswa kuchipatara mushure mekunyunyuta kwefudzi, ruoko, uye kurwadziwa kwemakumbo.
Muna June 1996, NFL nyota Deion Sanders akasungwa pamusana pemhosva dzisina mhosva mushure mokunge ((ipapo) muDallas Cowboy mumusarudzo akasarudza kusava nehanya nekudarika uye kusina zviratidzo zvehove zvakatumirwa pane imwe nzvimbo iri Southwest Florida International Airport.
Musi waMarch 12, 2007, Jacksonville Jaguars muchengeti Charles Sharon akapomerwa muTampa Florida nemabhiza maviri mushure mekutsvaga kwemotokari yake yakaratidza handgun yakabiwa pasi pechigaro cheSUV yake. Pfuti yacho yakanzi yakabiwa kubva kune imwe nhengo yehurumende Division of Alcoholic Beverages uye Tobacco. Sharon akapiwa mhosva yekubata kukuru kwepfuti uye kutakura bhiza rakavanzwa.
Mapurisa akatsvaga Sharon's SUV mushure mekunzwa zvavaidavira kuti marijuana inobva mumotokari.
57 ve 74
Sangano reNational Football League linebacker, TJ Slaughter (aka Tavaris Jermell Slaughter) akasungwa munaOctober 2003 muBackvilleville, Florida mushure mokunge apisa pfuti yake varume vaviri mumotokari. Mhosva dzacho dzakaderedzwa mushure mokuurayiwa kubvumidzwa kupa mamiriyoni mazana mashanu kune rudo uye kusiya pfuti yake.
Muna July 1994, Simpson akasungwa muLos Angeles, uye akapomerwa mhosva yekuponda mudzimai wake, Nicole Simpson neshamwari yake Ron Goldman. Akawanikwa asina mhosva mumhosva yakakurumbira. Akazove akawanikwa aine mhosva yekukuvadza mumhondi panguva yekutongwa kwehurumende.
Makore mashanu pamberi pekuponda kwaNicole naGoldman, Simpson akasungwa nekurova mudzimai wake, akabhadhara zvakanaka uye akaita maawa makumi maviri emabasa emunharaunda.
Nicole naGoldman vairwiswa zvakashata uye vakaurayiwa kunze kweimba yaNicole. Hapana mumwe munhu akambopomerwa mhosva yekuuraya.
American expert wrestler uye aimbova WWE nyanzvi yepamusoro Monty Sopp, (aka "Badd Ass" Billy Gunn) akasungwa muna 1990 pamhosva dzeDissolution of Marriage.
MuVirginia, NFL kusachengetedzwa kwakasununguka kweWashington Redskins Sean Taylor yakasungwa muna Gumiguru 2004, nekuda kwekutyaira motokari pasi pesimba rekudhakwa mushure mezuva rekuberekwa kwekutanga kweRedskins 'mupikiri Rod Gardner. Panguva yekusungwa kwake, Taylor akaramba kutora ropa doro rekuedzwa. Akasunungurwa mushure mokunge mutongi achiona vhidhiyo yemavhidhiyo emugwagwa weTlorin kuongorora, asi akatongerwa kukaramba kwake kuedza. Paakakumbira, Taylor akaregererwa nekuda kwekushayikwa kwechikonzero chakaita kuti mapurisa akumbire kuongorora kweBAC.
Imwe Carolina Carolina Panther cheerleader Renee Thomas akasungwa musi waNovember 7, 2005, mushure mekunge aita zvepabonde mune imwe nzvimbo yekushambidzira yeBanese Joe's muTampa pamwe chete neshamwari cheerleader Angela Keathley. Mumwe mukadzi akamirira kushandisa chikumbaridzo akachema uye Tomasi akamupa mhosva kumurova iye zvakaguma kuti vasungwa vaiswe. Akabva apa mapurisa Dhiyabhorosi yeChipiri cheimwe Panther cheerleader - Kristen Lanier Owen.
Musi waMarch 13, 2006, Tomasi haana kukumbira mhirizhonga kuti asiye mitemo yebhateri uye kuratidza kusabvumirwe kwemvumo uye akatongerwa kutsamwa kwekugadzirisa mazano, maawa makumi mashanu emasangano ehurumende uye $ 400 mukudzorera kune akabatwa. Gweta rake rakaramba zvakasimba kupomerwa kwakaitwa Thomas naKeathley mukuita zvepabonde usiku hwekurwisana.
Vakadzi ava vaviri vakadzingwa kubva kumaPether nekuda kwemabasa avo.
Muna December 2004, mutungamiri weightweight Mike Tyson akasungwa muArizona mushure mekunge achisvetuka muhombe yemotokari yakagadzika munzvimbo yekupaka yeimba yekugara. Tyson, uyo akanga akadhakwa nenguva iyoyo, akatongerwa nekukanganisa kwemhosva yekuparwa kwemhosva mushure mekuita pedo ne $ 1500 inokonzera kukanganisa kumotokari.
63 ve 74
Indianapolis 500-Mile Race muganhu wechina wenguva yakazara Al Unser, yakasungwa munaAugust 2006 pamhosva dzekuvhara nekudzivisa mahofisi mushure mekuedza kuenderera mberi nebhagwablo rakagadzirirwa neSATAT team ichiongorora kupamba. Apo vatevedzeri veBernalillo County vamiririri vakakumbira Unser kuti vabve munzvimbo, iye nemukoma wake Bobby, vakaramba. Kusununguka kwakasunungurwa kwekutevera kwaDecember.
MunaJuly 2002, nguva mbiri yeIndy 500 yaipinda Al Unser Jr. yakasungwa uye yakapomerwa nechisimba. Nguva pfupi mushure mechiitiko ichocho, Unser akazvicherechedza mu rehab uye vatsigiri vakaderedza nyaya yacho.
65 pane 74
Vatatu venguva yeIndiapolis 500 vakakunda muBobby Unser vaiva nemhosva yekuramba kusungwa uye kudzivisa musungwa akadonha nekuda kwe "kutadza kusanzwisisana" naBernalillo County, New Mexico vanoita basa munguva yepikisano yakatanga muna August 2006. Maererano nemitauriri, gwaro rebhagwa rakagadzirirwa panguva yekutsvaga mutengesi. Bobby nemukoma wake Al Unser vakaramba kubva munzvimbo iyo uye vakazobatwa.
66 pane 74
Muna December 2006, Florida Marlins chirongo chemvura Dontrelle Willis akasungwa paDI inopomerwa muMiami apo mapurisa akamumisa pashure pokunge amuona achibuda mumotokari yake uye achifamba mumugwagwa.
New York Inobata mukana mukuru wekubvuma Braylon Edwards akasungwa muManhattan munaSeptember 2010 uye akaraira nekufambisa paaidhakwa.
Musi waJuly 5, 2010, maimbova Oakland Raider Quarterback JaMarcus Russell akasungwa muMo Mobile, Alabama kuti ave nezvinhu zvinodzorwa.
Russell akabatwa nokuda kwekugara kwe codeine syrup sechikamu chekupupurirwa kwezvinyorwa zvinoputika.
Musi waMay 25, 2010, San Diego Mafambisi ekuchengetedza Kevin Ellison akasungwa nekuda kwekushandisa zvinhu zvakarongedzwa mushure memapurisa akamumisa kuti aende nokukurumidza mune imwe nzvimbo yechikoro.
Mapurisa anoti 100 Vicodin mapiritsi akawanikwa kumashure kwemotokari panguva yekutsvaga motokari yake. Akapomerwa mhosva yekuwana zvinhu zvinodzorwa.
70 pane 74
Musi waJuly 7, 2012, Minnesota Vikings inodzokera kumashure Adrian Peterson akasungwa muHoston, Texas nightclub mushure mokunge apinda mumubhedha nemumwe mupurisa asina basa aishanda kuchengeteka.
Maererano nemishumo, chiitiko chacho chakaitika pakuvhara nguva apo kuchengeteka kwaiedza kuendesa vatenzi vose kuti vaende. Peterson akafamba akatarisa kubha kuti awane girazi remvura uye akaregwa nemusungwa. Vose vaviri vakapinda mumusangano wokukwikwidza uye vatatu vemapurisa vasati vashanda vakauya uye vakabatsira kukunda Peterson.
Akasungwa nekuda kwekusungwa uye aifanira kutumira $ 1000 chibvumirano.
71 pane 74
Shaun White, 26, anozivikanwawo seFlying Tomato, akasungwa musi waSeptember 16, 2012, mushure mekunge mapurisa akadanwa ku Lowes Vanderbilt Hotel muNashville, Tennessee.
Maererano neDhipatimendi reMetropolitan Nashville, White inonzi inobva paawa yehotera moto pa2 am, iyo yakamanikidza vose vashanyi nevanoshandira kuti vabude. Yakaudzwawo kuti mushandi wepahotera akaona White achiparadza hotera yefoni.
Akachena akaedza kubva muhotera iri mumatareji, asi muenzi wehotera akaudza mutyairi kuti mapurisa akanga ari munzira kuenda kuhotera kuti ataure neVhite. Chichena chakaita nekukanda muenzi wehotera ndokubva atiza kubva kuhotera. Muenzi wehotera akazotevera White uye iyo mbiri yakabatana, zvichiita kuti White iwire uye ikarove musoro wayo pafence.
Chichena chakakumbirwa nemapurisa kuti asayine zvinyorwa zvisiri izvo, izvo zvaakaramba kuita. Akaendeswa kuchipatara, akabatwa uye akabudiswa. Akazonyorwa mabhuku uye akatongerwa kuparadza uye kudhakwa kwevanhu.
Zuva rakatevera White rakapa kukumbira ruregerero pane peji Facebook.
"Ndinoda kukumbira ruregerero nekuda kwesarudzo dzisina kuchenjera dzandakaita pamusoro pevhiki yekupedzisira uye nokuda kwekukanganisa kwakakonzera mhuri yangu, shamwari, vashandi vebhizimisi, hotera nevakashanyira," White akanyora. "Ndakanga ndichipemberera chiitiko chinofadza neine tani yemhuri neshamwari uye ndakatakurirwa. Ndine urombo zvechokwadi pamusana pemaitiro angu akaipa. "
Muna July 2012, Dallas Cowboys akazarura gurukota reDez Bryant akasungwa pakirasi A chirevo chemhosva chekuita zvechisimba mumhuri nekuda kwekurova amai vake vanaamai, Angela Bryant.
Maererano nemusangano wenhau unoitwa nemapurisa eDeSoto, Bryant akapomerwa mhosva yekurova amai vake, kusanganisira kumumanikidza pachifuva, kubata bvudzi rake, nekurova maoko nemaoko.
Tape 9-1-1 yakasunungurwa munyaya iyo Angela Bryant anonzwika pamusoro pekurwa kwaakatambura nemwanakomana wake. Akaudza mutauriri we 9-1-1 kuti yakanga isiri yekutanga kuti amurwadzisa.
"Handigoni kumurega achiita izvi," akadaro. "Ndiri kuzogumisa izvi nhasi." Ndine urombo. "
Akazopedzisira asarudza kusaisa mhosva.
Hurumende yeSeneti Royce West, Dez Bryant, gweta rehurumende, akaita musangano wekudhinda uye Angela naDez vakagara vakanyarara pamwechete, West vakaudza vatori venhau,
"Vari pano nhasi kuratidzira kuti vanodanana uye vanotsigirana mumwe nomumwe, sezvavakaita zvisati zvamboitika vhiki yapfuura." Akaenda kuti awedzere, "VaB Bryant vane kusawirirana.VaBriant nemhuri yake vanonzwisisa hutano hwemhirizhonga yemhuri.Vanotenda kana izvo zviitiko zvichinyorwa, achabviswa pane zvese zvinopomerwa zvechisimba chemhuri."
Nguva pfupi mushure mechiitiko ichi, Cowboys yeDallas yakagadzirisa zvibvumirano zveBryant kutevera izvo zvaisanganisira kupa mazano, kune pakati peusiku, pasina doro uye pasina mabhuku.
Jason Kidd akasungwa musi waJuly 15, 2012, nemapurisa eSouth Hampton nokuda kwekufambisa paaidhakwa mushure mokunge aputira mupurisa rwefoni. Chiitiko chacho chinonzi chakaitika kusvika 2 am uye akabatwa kuchipatara nekuda kwekukuvara kwakakomba. Akabva atorwa kunzvimbo yemapurisa uye akatongerwa mhosva yeDWI.
TMZ.com yakashuma kuti kwaiva nezvapupu zvakawanda zvakaona Kidd akadhakwa zvekuti aifanira kubudiswa kunze kwechikwata kwaakanga apedza manheru ano kunwa nekuparadzanisa.
Kidd haana kutongopomerwa mhosva yemhosva yeDWI.
74 pane 74
Musi waJuly 9, 2011, Hines Ward akasungwa muDeKalb County, Georgia shure kwemapurisa akamuona achipinda uye achibuda mumigwagwa, ndokurova. Akasungwa uye akatongerwa nekutyaira akadhakwa, asi mhosva yacho yakazobviswa sechikamu chekukumbira kwekuita.
Ward yakakumbira mhaka yekutyaira kusina maturo uye yakagamuchira gore rimwe pakuongororwa, maawa makumi matanhatu emasangano emunharaunda uye $ 2 400 yakanaka.
Kuipa Kwekufa Rowani Mujeri Patricia Blackmon
Akatongerwa Killer Sharee Miller kusvika Wed
Vatiza Vanoda neFBI yekuuraya
Akaurayiwa Mwana Muurayi Darlie Routier: Aine Mhosva kana Ngarairi?
Marita Stewart Case
Sei Vana Vaberekwa Nemavara Ebhuruu?
Chirongwa chehondo ChiZulu
Dhiyabhorosi Dhiyabhorosi - Nhoroondo yeAkare Yokugadzirira Method
Zvidhori: The Ancient Cousins ​​of the Dinosaurs
Nzira dzeWestern Occult Tradition
Hondo Yakafuridzirwa "Inonzi Star-Spangled Banner"
Krisimasi Bhuku reMifananidzo Rakanaka Favorites
Dhigiri Rule: NBA Age Limit
Kuporesa Zvishamiso zveSoursop (Guanabana) Zvibereko
Sagittarius uye Capricorn Rudo rwakafanana
The Top 10 Zuva Rokuda Adams Sandler Movies
Twelver Shiites, kana Ithna Ashariyah
The Genius Spiritual Swami Vivekananda
Quotes Kubva kuna Charles Dickens 'Oliver Twist'
Achishandisa 2 Simple Simple Tense yeSpanish
Chirongwa Chekutanga Kwevana Dzidzo
Metallic Character Properties nemitambo
Bhaibheri Dzvene (BSN)
10 Kujekesa Kukanganwira Quotes
Kunzwisisa Mazano Akatsigira, Mariro uye Maitiro Ekutengeserana
Chii Chinonzi Vakadzi Nhoroondo?
Basa reHLOOKUP Excel
Ndiko Kadhi Kwereti A Form Of Money?